कति छ देशभर कांग्रेसको क्षमता ? सार्वजनिक भयो यस्तो विवरण !Nepalpana - Nepal's Digital Online
कति छ देशभर कांग्रेसको क्षमता ? सार्वजनिक भयो यस्तो विवरण !
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमा आसन्न १४औँ महाधिवेशनका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सङ्ख्या आठ लाख ५२ हजार ७११ पुगेको छ ।
श्रावण १४, २०७८ बिहिवार २०:३७:४१ बजे : प्रकाशित